ဦးစွာ ဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်၏ အခန်း (၁) ကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံမှာ ...
အခန်း(၁) အနေနဲ့ - မေးခွန်း (၁) ဖြစ်တဲ့
TRUE/FALSE မှာ (i) (ii) - ၂ မှတ်
(၂) Completion မှာ (i) (ii) - ၂ မှတ်
(၃) မှာတော့ အခန်း (၁) မှ (၄) အထိ ကျက်မှ - ၂ မှတ် ရမှာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ မေးခွန်း (၄) နဲ့ (၅) မှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အခန်း (၁) မှ (၄) အထိကျက်မှ တစ်ပုဒ်စီ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆရာတို့အနေနဲ့ အခန်း (၁) မှ (၄) အထိ အုပ်စုတစ်ခု ထားပြီး မေးခွန်းကို လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ...
No.(1) TRUE/FALSE ... Chapter (1) – (i) (ii),
(2) – (iii) (iv), (3) – (v), (4) – (vi) (vii) အားလုံးမှ - ( ၇ မှတ်)
No.(2) Completion ... Chapter (1) – (i) (ii),
(2) – (iii) (iv), (3) – (v), (4) – (vi) (vii) အားလုံးမှ - (၇ မှတ်)
No. (3) Short question ... Chapter (1) မှ (4) အထိ (၁ ပုဒ် ) - (၂ မှတ်)
No. (4) Short question……. Chapter (1) မှ (4) အထိ (၁ ပုဒ်) - ( ၄ မှတ်)
No. (5) Long question……. Chapter (1) မှ (4) အထိ (၁ ပုဒ်) - ( 8 မှတ်)
ဒီတော့ အခန်း (၁) မှ (၄) အထိ အပိုင်ကျက်မှတ်မယ်ဆိုရင် တပည့်တို့အနေနဲ့ ရနိုင်မယ့် အမှတ်ဟာ စုစုပေါင်း (၂၈ မှတ် ) ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ အခန်း (၅) ကို လေ့လာကြပါစို့
No. (1) မှာ …….. (viii) (ix) – (၂ မှတ်)
No. (2) မှာ …….. (viii) (ix) – (၂ မှတ်)
No. (3) မှာ …….. (၁ ပုဒ်) – (၂ မှတ်)
No. (4) မှာ …….. (၁ ပုဒ်) – (၄ မှတ်)
No. (5) မှာ …….. (၁ ပုဒ်) – ( ၈ မှတ်)
ဒီတော့ အခန်း (၅) ကို အပိုင်ကျက်မှတ်နိုင်ရင် (၁၈ မှတ်) ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတိုင်းပဲ အခန်း (၆) (၈) (၉) (၁၁) တို့လည်း အခန်း (၅) မှာ ရနိုင်မယ့် အမှတ်အတိုင်းပဲ (၁၈ မှတ်) စီ ရနိုင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အများစုဟာ အခန်း (၆) (၈) (၉) နဲ့ (၁၁) တွေကို မကျက်မှတ်ကြဘဲ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အတွက်ပဲ လေ့လာကြတာ များပါတယ်။ အချို့ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများဆိုရင် လုံးဝမလေ့လာဘဲ ချန်ထားခဲ့တာ များပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီအခန်းလေးခန်းရဲ့ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အတွက် ရနိုင်မည့် အမှတ်တွေက အလွန်တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။ ဆရာအနေနဲ့ အကြံပြုလိုတာကတော့ လေးခန်းစလုံး မလေ့လာနိုင်ရင်တောင်မှ နှစ်ခန်းလောက်တော့ လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအခန်းတစ်ခုချင်းစီက ရမယ့် အမှတ်တွေဟာ တပည့်တို့အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီး ဘာသာရပ်တွေ လျှောက်တဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ခံရမယ့် အမှတ်ပေါင်းအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်နေလို့ပါ။ တစ်ခန်းချင်းဆီကနေ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်က ရမယ့်အမှတ်တွေဟာ တစ်ခန်းကို (၄ မှတ်) ဖြစ်ပြီး လေးခန်းဆိုတော့ (၁၆ မှတ်) ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဇီဝဗဒ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေ မဖြစ်မနေ ကျက်မှတ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အခန်းတွေဖြစ်တဲ့ အခန်း (၇) (၁၀) (၁၂) တွေ အကြောင်း ဆွေနွေးရမယ်ဆိုရင် ...
Chapter (7) (10) (12) အတွက် ... မေးခွန်း ....
(၁) မှာ - (၁ မှတ်)၊
(၂) မှာ - (၁ မှတ်)၊
(၃) မှာ - (၂ မှတ်)၊
(၄) မှာ - (၄ မှတ်)၊
(၅) မှာ - (၈ မှတ်)
တစ်ခန်းချင်းစီအတွက် (၁၆ မှတ်) (၃) ခန်းပေါင်း ဆိုရင်တော့ (၄၈ မှတ်) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရးကြီးဆုံးက ဒီသုံးခန်းကို အသေးစိတ် တိတိကျကျ၊ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကျက်မှတ်ရုံတင်မရဘဲ ပုံတွေပါ သေသေသပ်သပ်နဲ့ မှန်အောင်ဆွဲနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ မေးခွန်းပုံစံအရ ပေးထားတဲ့ (၄၈ မှတ်) ကို ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဆရာ့အနေနဲ့ မှာချင်တာက တပည့်တို့ကို ဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်မှာ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ အမှတ်တွေရဖို့ဆိုရင် အပိုင်းလေးပိုင်းခွဲပြီး ဆွေးနွေးပြထားတဲ့အတိုင်း
အခန်း (၁) (၂) (၃) (၄) အပိုင်ကျက်မှတ်နိုင်ရင် ... ( ၂၈ မှတ်)၊
အခန်း (၅) အပိုင်ကျက်မှတ်နိုင်ရင် ... (၁၈ မှတ်)
အခန်း (၆) (၈) (၉) (၁၁) အပိုင်ကျက်မှတ်နိုင်ရင် ... (၇၂ မှတ်)
အခန်း (၇) (၁၀) (၁၂) အပိုင်ကျက်မှတ်နိုင်ရင် ... (၄၈ မှတ်) အမှတ်တွေ အသီးသီးရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဆွေးနွေးပြထားတဲ့ အမှတ်တွေက အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ (၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ ) ဇီဝဗေဒ မေးခွန်းတွေကနေ သုံးသပ်တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပည့်တို့အနေနဲ့ ဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်ကို ဖြေဆိုရာမှာ အောင်မှတ်ရရုံဆိုရင် ဘယ်အခန်းတွေ အဓိကထား ကျက်သင့်တယ်။
ဥပမာ - အခန်း - (၇၊ ၁၀၊ ၁၂) (သို့) ( ၅၊ ၇၊ ၁၀) (သို့) (၅၊ ၁၀၊ ၁၂) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခန်းတွေ ကျက်မှတ်လို့ ပိုင်နိုင်ပြီဆိုရင် အောင်မှတ်လွန် ဒါမှမဟုတ် ဂုဏ်ထူးအတွက် ထပ်မံကျက်မှတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အမှတ်ပိုရစေဖို့ ဘယ်အပိုင်းကို ရွေးကြမလဲ၊ မိမိအနေနဲ့ အောင်မှတ်လွန် အမှတ်လောက်ရရင် ကျေနပ်တယ် ဆိုပါစို့။
အခန်း (၁) မှ (၄) အထိ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကို လေ့လာပါ။ ဒါဆိုရင် အောင်မှတ် + (၁၄ မှတ် ) ထပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း (၅) မှ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကိုပဲ လေ့လာမယ် ဆိုရင်တော့ အောင်မှတ်+ (၄ မှတ်) ပဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း (၆) (၈) (၉) (၁၁) မှ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကို ထပ်လေ့လာမယ်ဆိုရင် အောင်မှတ် + (၁၆ မှတ်) ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်ထူးအတွက် ရည်မှန်းတဲ့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေ အတွက်ကတော့ အနည်းဆုံး လေးခန်းကို အပိုင်ကျက်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - အခန်း (၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂) ရနိုင်မယ့်အမှတ် ... (၆၆ မှတ်)၊
ဂုဏ်ထူးမှတ်အတွက်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် အမှတ်ထပ်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အခန်း ( ၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂ ) + ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အတွက် အခန်း (၁၊ ၂ ၊ ၃၊ ၄) = ၆၆ + ၁၄ = ( ၈၀ မှတ်)
အခန်း (၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂) + ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အတွက် အခန်း (၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၁) = ၆၆ + ၁၆ = (၈၂ မှတ်) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထပ်ပိုပြီး အမှတ်ကောင်းချင်ရင်တော့ အဓိကအခန်းတွေ ဖြစ်တဲ့
အခန်း (၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂) + ကျန်တဲ့အခန်းတွေက ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် အမှတ်တွေကို ရနိုင်သလောက် လေ့လာရန် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ဆရာရှင်းပြခဲ့သလို အခန်းအသီးသီးကနေ ရနိုင်မယ့် အမှတ်တန်ဖိုးကို နားလည်သဘောပေါက်ကြရင်း ကိုယ်က အမှတ်ဘယ်လောက်အထိ ရည်မှန်းထားလဲ၊ ကိုယ့်ရည်မှန်းထားတဲ့ အမှတ်ရဖို့ ဘယ်အခန်းတွေကို ဦးစားပေး ကျက်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်း အပိုင်ကျက်မှတ်ပါ။
xx ဇီဝဒေ ဘာသာရပ်မှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အမှတ်တွေကို မဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်
(၁) စာလုံးပေါင်းမှန်အောင် ကျက်ပါ၊ ရေးကျက်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေကို ရေးကျက်ပါ။
(၂) ပုံတွေကို သပ်ရပ်လှပအောင်ဆွဲပါ။ အညွှန်းတွေကို ညီညီညာညာ၊ သေသေသပ်သပ်တပ်ပါ။ ပုံတစ်ပုံလုံးရဲ့ အညွှန်းဖြစ်တဲ့ Caption ကို ပုံတိုင်းမှာထည့်ပါ။
(၃) မေးခွန်းဟောင်းတွေကို လေ့လာပါ။ နားမလည်ရင် အနီးစပ်ဆုံး ဆရာ/ဆရာမတွေကိုမေးပါ။ xx
ဆရာရေးသား ဆွေးနွေးပြခဲ့တဲ့ ဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းမှ ရနိုင်မယ့် အမှတ်များနဲ့ ကျက်မှတ်ပုံတွေ ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် တပည့်တို့အတွက် အခုလာမယ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲမှာ အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ရရှိနိုင်ပါစေ။